Umgaqo-nkqubo wabucala | Olona tutorial lubalaseleyo kwiiGerman | IWebes.com
Ikhaya / Blog / Umthetho wabucala
Esona sifundo siGqibeleleyo seGamers | IHowiees.com ("thina", "thina", okanye "yethu") isebenza kwezona Zifundo ziBalaseleyo zaBadlali | Howiees.com iwebhusayithi ("iNkonzo").
Eli phepha likuxelela ngemigaqo-nkqubo malunga nokuqokelela, ukusetyenziswa kunye nokudalulwa kweNkcukacha zaBantu xa usebenzisa iNkonzo.
Asiyi kusebenzisa okanye ukwabelana ngolwazi lwakho nabani na ngaphandle ngaphandle njengoko kuchazwe kule Mgaqo-nkqubo Wobumfihlo.
Sisebenzisa iiNkcukacha zoBuntu bakho ekuboneleleni nasekuphuculeni inkonzo. Ngokusebenzisa leNkonzo, uyavuma ukuqokelelwa kunye nokusetyenziswa kolwazi ngokungqinelana nale polisi. Ngaphandle kokuba kuchazwe ngenye indlela kule Mgaqo-nkqubo wabucala, amagama asetyenziswe kule Mgaqo-nkqubo wabucala aneentsingiselo ezifanayo nakwiMigaqo neMiqathango yethu, efumaneka kwi-https:
Ngelixa sisebenzisa iNkonzo yethu, sinokukucela ukuba usinike ulwazi oluthile oluchongiweyo olunokusetyenziselwa ukunxibelelana nawe okanye ukukuchonga. Ulwazi oluchongiweyo lomntu ("Ulwazi lobuqu") lunokubandakanya, kodwa alukhawulelwanga:
Siqokelela ulwazi oluthunyelwa ngumkhangeli wakho naphi na xa undwendwela iNkonzo ("iLog Data"). Le Datha yeLog inokubandakanya ulwazi olufana nedilesi yekhompyuter yakho ye-Intanethi ("IP"), uhlobo lwesikhangeli, inguqulelo yesikhangeli, amaphepha eNkonzo yethu oyindwendwelayo, ixesha kunye nomhla wotyelelo lwakho, ixesha olichithe kula maphepha kunye nezinye manani.
UGoogle, njengomthengisi wesithathu, usebenzisa ikuki ukusebenzisa iintengiso kwiNkonzo yethu.
Iicookies ziifayile ezinedatha encinci, enokubandakanya into eyaziwayo engaziwayo. Iicookies zithunyelwa kwisikhangeli sakho kwiwebhusayithi kwaye zigcinwe kwikhompyuter yakho kwihard drive.
Sisebenzisa "cookies" ukuqokelela ulwazi. Unokuyalela isikhangeli sakho ukuba saliwe zonke iicookies okanye ubonise xa kuthunyelwa ikuki. Nangona kunjalo, ukuba awuzamkeli ikuki, ngekhe ube nakho ukusebenzisa iinxalenye ezithile zeNkonzo yethu.
Singasebenzisa iinkampani zenkampani yesithathu kunye nabantu ngabanye ukulungiselela inkonzo yethu, ukubonelela ngeNkonzo ngenxa yethu, ukwenza iinkonzo ezinxulumene neenkonzo okanye ukuncedisa ukuhlalutya indlela iNkonzo yethu isetyenziswa ngayo.
La maqela angaphandle afikelela kwiiNkcukacha zakho zobuqu kuphela ukwenza le mi sebenzi egameni lethu kwaye unyanzelekile ukuba angabonakali okanye awisebenzise nayiphi na injongo.
Ukhuseleko lweenkcukacha zakho zobuqu lubalulekile kuthi, kodwa khumbula ukuba akukho ndlela yokudluliselwa kwi-intanethi, okanye indlela yokugcina i-elektroniki yi-100% ikhuselekile. Nangona silwela ukusebenzisa iindlela ezamkelekileyo zorhwebo ukukhusela i-Information yakho yoBuntu, asikwazi ukuqinisekisa ukukhuselwa kwayo.
Inkonzo yethu inokuthi iqulethe iikhonkco kwezinye iisayithi ezingasetyenziswanga kuthi. Ukuba ucofa kwikhonkco lenkampani yesithathu, uya kuthunyelwa kwisayithi lomntu wesithathu. Sikucebisa ngokukhawuleza ukuba ubuyekeze iMgaqo-nkqubo Yobumfihlo kuyo yonke indawo oyityelelayo.
Asinakho ukulawula, kwaye asinakuthatha uxanduva malunga nomxholo, imigaqo-mfihlo okanye iinkqubo zaso nasiphi na isayithi okanye ezinye iinkonzo.
Asiqokeleli ngokuziwayo ulwazi oluchongiweyo lwabantwana abangaphantsi kwe-18. Ukuba ungumzali okanye umgcini kwaye uyazi ukuba umntwana wakho unikezele ngeNkcukacha Zomntu, nceda uqhagamshelane nathi. Ukuba sifumanisa ukuba umntwana phantsi kwe-18 uye wasinika iNkcukacha Zomntu, siya kususa loo nkcazelo kwiinkonzo zethu ngokukhawuleza.
Siza kutyhila iInkcukacha zakho zoBuntu apho kufuneka ukuba wenze njalo ngomthetho okanye kwi-subpoena.
Ukuba unemibuzo malunga nale nkqubo Yobumfihlo, nceda uqhagamshelane nathi.